Mashruuc Ethiopia ugu dhoofiso biyaha la cabo Jabuuti ayaa caqabad kala kulmay quwada korontada – Xeernews24
Mashruuc Ethiopia ugu dhoofiso biyaha la cabo Jabuuti ayaa caqabad kala kulmay quwada korontada
Mashruuc Ethiopia ugu dhoofiso biyaha la cabo Jabuuti ayaa caqabad kala kulmay quwada korontada oo aan joogto ahayn. Mashruuca, oo ay gacanta ku hayso shirkad Shiine ah, ayaa ah dhuun dherarkeedu dhan yahay 220km oo isku xidha soonka Sitti ee DDS iyo dalka Jabuuti.
Shirkada Shiinaha ah, CGC-OC, ayaa xustay in mashruuca la dhamays tiray laakiin hawlgalkiisu aad u hooseeyo madaama ay jirto baahi dhanka korontada ahi. Shirkada ayaa tilmaantay inay hadda adeegsato matooro gaar ah.
Mashruuca oo ka bilowda soonka Sitti ayaa ka kooban 28 ceel oo ay isku xidhaan dhuumo dhaadheer. Waxaa loogu talagalay inuu biyaha ka haqabtiro dalka Jabuuti, hasayeeshe waxaa hadda biyaha mashruuca hela degmada Calisabiix iyo magaalada Jabuuti oo hesha 15 – 20%.
Mashruuca oo ku kacay aduun dhan $339 milyan ayaa waxaa maalgaliyay bangi laga leeyahay Shiinaha. Waxaa dhismihiisa la bilaabay 2015kii waxaana lagu tiriya inuu kamid yahay maashriicda biyaha ee ugu waaweyn qaarada Afrika. Qorshaha mashruuca ayaa ah in muddo 30 sano ah loo dhoofiyo biyaha dalka Jabuuti.
Ethiopia ayaa ku tiirsan quwada korontada ee laga dhaliyo biyaha. Qaybo wadanka kamid ah ayaa laga dareema koronto yaraan iyada oo xiliyada qaarkood leydhka la tashilo taaso dhibaato ku ah dhaqaalaha dalka iyo meheradaha.
Wadanka ayaa quwada korontada iyo biyaha u dhoofiya wadamada dariska ah si loo helo lacag adag, balse qaybo badan oo dalka ah ayaan lahayn leydh iyo biyo toona.
Gobolka Soomaalida ayaa kamid ah meelaha baahida korontada iyo biyaha nadiifta ah aad looga dareemo.
Mashruuca, oo ka bilowda degmada Hadhagaale ee soonka Sitti, ayey dhuumihiisu sii maraan 7 degmo oo kale ilaa uu ka gaadho Jabuuti
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/11/eau.jpg 296 592 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-11-10 21:20:442019-11-10 21:20:44Mashruuc Ethiopia ugu dhoofiso biyaha la cabo Jabuuti ayaa caqabad kala kulmay quwada korontada
Doodaha nuucan oo kale ah ayaa xal u noqon kara qadyada gobolka Sitti Liiska Golaha Dhexe Ee ONLF Ee ladoortay iyo Codadkii ay kala heleen.